kang - Synonyms of kang | Antonyms of kang | Definition of kang | Example of kang | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for kang
Top 30 analogous words or synonyms for kang
ဂျွန်အွန်ဂျီ In 2015, Eunji starred as the female lead role in the KBS2 high school drama "Cheer Up!" playing the role of Kang Yeon-doo. The drama involves the life of high school students and their struggles inacheerleading squad.
Street punk D-beat (Discore or kang(boot)) သည် ၁၉၈၀အစောပိုင်းတွင် discharge တီးဝိုင်းမှာ အတုယူ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပထမအုပ်စုမှာ The Varukers ဟုလည်းခေါ်သည်။ D-beat သည် ကြွေးကြော်သံများကျယ်လောင်စေရန်ဂရုစိုက်သည်။ ထူးခြားချက်မှာ ပုံစံသည် heavy metalနှင့် နီးစပ်စေရန် ဖန်တီးထားသည်။ crust punkနှင့်လည်းနီးစပ်သည် လေးလံ၍ အပြောင်းအလဲရှုပ်ထွေးသည်။ D-beat တီးဝိုင်းသည် စစ်ပွဲပပျောက်ရေး၊ မင်းမဲ့ဝါဒပပျောက်ရေး စာသားများပါရှိသည်။ ၁၉၈၀ anarcho-punk တီးဝိုင်းများ၏ ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာ nuclear ပုံရိပ်များနှင့်လည်း နီးစပ်သည်။ ဤပုံစံသည် အထူးသဖြင့် ဆွီဒင်တွင် ကျော်ကြားခဲ့သည်။ Antic Cimes နှင့် mob 47 တို့ပါရှိသည်။
ခွန်ဆာ ခွန်ဆာကို တရုတ် ဖခင် Khun Ai (Zhang Bingyao) နှင့် ရှမ်းမိခင် Nang Hseng Zoom တို့က မွေးဖွားခဲ့သည်။ Nang Kayyun (၁၉၉၃ ကွယ်လွန်) နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သားသမီး ရှစ်ဦး ရရှိခဲ့သည်။ သား သမီးများမှာ Nang Long (Khajit), Zarm Merng (Phajon), Zarm Herng (Phathai), Nang Kang (Khanittha), Zarm Zeun (Phairote), Zarm Myat (Phaisarn), Nang Lek (n.a.), Zarm Mya (Pitak) တို့ ဖြစ်သည်။